आमरण अनसन Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 01:38:11
जापानी समय : 04:53:11
Tag: आमरण अनसन
बाढीपहिरो पीडितका नाममा २३ दिनपछि डा. केसीको अनसन स्थगित
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखि २३ दिनदेखि अनशन डा. गोविन्द केसीले अनशन स्थगित गरेका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो र डुवानका कारण जनधनको क्षति भएकाले डा. केसीले अनशन स्थगित गरेको जनाएका छन् ।
केसीले आफू जसको स्वास्थ्यका लागि संघर्ष गरेको हो उनीहरु पीडामा भएका बेला अनशन बसिरहनु उचित नभएको बताएका छन् । केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सुझाव समेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखि डा. केसीले साउन ९ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका थिए ।
उनको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै चिकित्सकहरुले देशभरीका अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिसकेका थिए । तर गएको विहीबारदेखि बाढी, पहिरो र डुवानका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा जनधनको क्षति भएपछि डा. केसीको आग्रहमा चिकित्सकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिइसकेका छन् ।
Posted in जन सरोकारTagged आमरण अनसन